Abantu abadumile beGolfers Nonke iifanethi zifuna ukwazi
Amadoda amakhulu kunawo wonke kwiGrafti yoBugcisa
I-Golfing iye yintsikelelo ekhethiweyo ukususela ekuvelweni kwayo kweSenteke ye-15 yeSkotshani, kunye nokuqhubela phambili kwiXesha le-18 ne-19 yeNgilani njengomdlalo wezityebi, kodwa bekungekho kude kube nguqulelo oluhlelwe ngokutsha kunye nolulandelayo lwegalufa-olulawulwa yiGolfers ' Amashishini (i-PGAs) njengeRoyal ne-Ancient Golf Club ye-St Andrews yaseNgilandi (R & A) okanye i-United States Golf Association (USGA) - ezo golisa eziqeqeshelwayo zaqala ukuqwalasela.
Ukususela ngowokuqala kweengcali zobugcisa ngo-1860 kwi-Prestwick Golf Club yaseScotland, abesilisa baye balawula ihlabathi legalufu-ukunyamekela ngakumbi nangakumbi nangaphezulu kwezi PGAs kunye neziphumo zentambo ezenziwe ngeenxa zonke kwihlabathi.
Ngelishwa, amadoda aqala ukuqala kwesekethe yegalufu yegalufa - bekungekho ngo-1959 ngokusekwa kweLadies Professional Golf Association ukuba abafazi babe nezwi okanye umdlalo wabo kwimidlalo. Sekunjalo, abaninzi abafazi abadumileyo begalufu baye bavela kwindawo, besuka bafaka amanqaku abo kunye nabalingani babo besilisa kwizifundo ezininzi ezidumileyo.
Imbali emfutshane yeGalati iphakama kuLwazi
Abaqeqeshi bezemidlalo kuqala bafumana ingqwalasela yamazwe ngamazwe Ngowe-1860, xa i-Open Championship (okanye iBritish Open) ibanjwe kwi-Prestwick Golf Club eScotland phakathi kwabadlali abalu-8 begalufu abaqeqeshiweyo begalufa ngaphaya kweendlela ezintathu apho uWillie Park Sr wamshaya khona uTrans Morris ngeentsimbi ezi-2 .
Njengoko umdlalo 'udumo lwasasazeka eUnited States, i-USGA yakhiwa ngowe-1895, kwaye yabamba i-US Open ngaloo nyaka kwi-Newport Country Club ye-9 hole hole e-Newport, eRode Island. Umncintiswano ubonisa umncintiswano wamaxesha angama-36 phakathi kweengcali ezili-10 kunye nomntu oyedwa, kunye nomntu oneminyaka engama-21 ubudala ongumNgesi waseMelika ogama lakhe linguHorace Rawlins wabuya ekhaya imali engama-$ 150 kunye nomdanso wegolide we-$ 50 kunye ne-Open Championship Cup. lakhe iqela.
Ngokudalwa kwe-USGA, ukuthandwa kwegalufa kwathatha ekupheleni kwekhulu nangama-1910, bekukho inani leethamnethi zentatyambo kodwa kusekho ubuphiswano bobugcisa obulodwa kuphela e-United States; ngoko, ngowe-1916, elinye iqela labagadi begalufu lasekwa - i-PGA ye-US - kwaye kunye nalo, elinye iqela lomqhudelwano lazalwa. Umqhubi wokuqala, uJim Barnes, wanikezwa i-$ 500 kunye needalesi zegolide yegolide. Ngokwahlukileyo, u-2016 ophumeleleyo, uJimmy Walker, wathola i-1.8 million yezigidi.
Ukugqitywa uluhlu lweengqobhoko ezinkulu yiMasters Tournament ngokwawo, eyasungulwa ngo-1934 e-Augusta, eGeorgia yi- Bobby Jones , owayengumdlali onobungqingili onobungqingili, owawunqotshwa kuqala nguHorton Smith owathola i-R500 i-1,500 kunye nesihloko se-"Augusta National Invitational" kamva wabizwa kwakhona kwiMasters emva kokufakwa kwintengiso ye-Europe Tour, Japan Tour ye-Golf kunye ne-PGA Tour.
Amacandelo amathathu alandelayo achaza iinjongo eziphambili zegolisa zeendoda kwimbali yezityebi zemidlalo, ehlanjwe ngonyaka i-golfer yayisebenza kwesekethe yecandelo.
Imbali yabaGoli beGoli: Uqala kwi-1930s
1896-1912: UJames Braid wayelungu leBritish "Triumvirate Enkulu" yaseBrithani eyaqala ukuphumelela ezintlanu kwi-Open Championship, efuna ukunqoba kwiBritish Open ngo-1901, 1905, 1906, 1908 no-1910 ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi ukuba abe ngumhlali ohlala kuyo ibhola yegalufa ngowe-1912.
1920-1935: UTommy Armor waqala umsebenzi wakhe ngokuwina i-Amateur ye-1920 yaseFransi waza waba ngu-3 wongqongqo omkhulu weqonga kwi-1920s no-1930, ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi ngo-1935 ukuze aqhubeke nokufundisa. Igweba liye laziwa njengomnye wabagadi abahloniphekileyo begalufu lonke ixesha, kwaye igama lakhe lisasetyenziswa njengegama legama leglafu zegalufa.
1926-1938: "U-Lighthorse" UHarry Cooper wayengumdlali ogqwesileyo ophezulu kwi-1920s no-1930 kwaye udlalwa njengowomdlali ongcono ukuba angayinqobe iqela lobungcali - nangona wawuthatha iikhomishana ezingaphezu kwezi-30 ezingafanwanga njengezikhundla.
1924-1977: UHenry Cotton wayengumbutho we-golfer weNgilani we-1930 ukuya kwi-1930 yonke indlela yokuthatha umhlalaphantsi wakhe ngo-1977, kodwa ubuninzi beempumelelo zakhe zafika ekuqaleni kwimiba yakhe ngeempawu ezintathu ze-Open Championship kwiminyaka elishumi yokuqala.
Ezinye izinto ezibonakalayo zegalufu ziquka uJH Taylor , uLiana Diegel , uCraig Wood , uTom Weiskopf , uHarry Vardon noPeter Thomson ,
Iminyaka yobudala yeGoli yabaGoli: i-1940s ukuya ku-1970
1947-1969: UPeter Alliss uzuze i-tournaments ezingama-21, waba ngongomnye wabagadi begalufu ephezulu eYurophu kwiminyaka ye-1950 kunye neye-1960 ngaphambi kokuba angene emisebenzini emide njengomnye wabavakalisi begalufa ababhekwe kakhulu kwi-TV.
1949-1968: UJulius Boros wayengumqhubi weqonga lobungqina obu-3 kwi galufa, eyaziwa ngokuba nguyena "wegolisa" ongcono kakhulu wegolfu wanikezelwa ukuba umsebenzi wakhe wePGA Tour ukhululekile kwiminyaka engama-40. Enyanisweni, ubamba irekhodi kwigalufa yamadoda njengowomdala oyinqobongela oyinqola kwaye waphumelela kokubili ii-1971 no-1977 ze-PGA Championships.
Ngo-1950-1957: UJack Burke Jr wabuya emkhosini ukuze atyelele amaxesha amane kwi-PGA Tour ka-1950 ngaphambi kokuba aphumelele ukuphumelela kweengqungquthela ezimbini ngo-1956. Emva kokuthatha umhlala-ntshatsheli wobugcisa ngo-1957, uBurke kunye neqabane lakhe bathenga umhlaba ngaphandle kwe-Houston oya kuba kamva waba yiChampions Golf Club.
1951-1961: Iminyaka kaTommy Bolt njengomqhubi wePGA Tour ininzi kwiminyaka yee-1950 kwaye yaquka inkululeko eyodwa ye-US Open, kodwa kamva, uBolt wabandakanyeka kumcimbi owawunceda ukuqalisa iNtambo yeeMidlalo kubadlali begolfu abaphezulu.
1956-2000: Iinqaba zikaGay Brewer kwindwendwe zafika kuma-1960s nakwi-1970 kwaye emva koko ngexesha le-Champions Tour Champions 'Championship, kwaye ukhunjulwa njengengqobhoko yamaMasters kodwa kunye "neloopy" yakhe yokugubha kunye nokuhleka kwehlazo.
Ngo-1961- 2012: UBol Charles wayengowokuqala-golfer wokuqala onqamlekileyo ukuphumelela inkokheli enkulu, kunye ne-golfer yokuqala yokushiya ukuba ibe yinkwenkwezi yamazwe ngamazwe emdlalweni kunye ne-1963 yaseBritish Open ukunqoba. Usaphila epulazini eNew Zealand kwaye uye waziwa ukuba enze ukubonakala kwi-PGA Abadala Abavulekileyo.
Ezinye izinto ezibonakalayo zegolfu ziquka uTom Watson , iWall Wall , uJimmy Demaret , uKen Venturi , uLinny Wadkins kunye noLee Trevino
Ubudala Bamaxesha Amanqaku Afanayo AbaGoli: Ema-1980 ukuya namhlanje
1986-2000: Umsebenzi kaGaul Azinger wegalufa njengomdlali okhulile ekupheleni kweminyaka yama-1980 kunye neye-1990s ngaphambi kokuphazanyiswa yimfazwe nomhlaza; okwangoku, wenza uphawu kuMdlalo weRyder kokubili njengomdlali kunye nomphathi weqela, ngaphambi kokuba aqhubele phambili kumsebenzi wokusasaza ngo-2000.
Ngowe-1980-Namhla: Abazalwana bakaFred ngabanye begolisa abadume kakhulu kwixesha lakhe, kunye nabalandeli kunye nabalingani bakhe begalufu, kunye neendlela zakhe ezibonakalayo zilula kwaye enye yee-tempos ze-swing i-swing tempos kwi-golf. Ukususela ngo-2010, ababini beye baqala ukudlala kwi-Championship Championship.
Ngowe-1987-Namhla: UJohn Daly uphumela kwindawo yegalufa eneemoto ezikhulayo kunye noyomqoqo ophhambili lobungqina kunye no-1990 Inkqubela yeSizwe yoKhenketho kunye nokulandela.
Ngo-1996-Namhla: I- Tiger Woods ngokuqinisekileyo i-golfer enkulu kakhulu, ngokusayina kwayo "iTiger Effect" izihlwele ezithandekayo kunye nokwandisa iipaki zee-PGA zokuhamba kunye nokulinganisa okuqala ngovulo lwe-Woods ngo-1996. I-Woods iyancintisana namhlanje kodwa ukususela ngo-2014 ukuya ngo-2017, waxhatshazwa kakhulu kwaye walwa ne-addiction - yonke into eye yamgcina kwiiklasi zegalufa.
Ezinye iindawo ezibonakalayo zegalufa zonyaka wamandulo ziquka uC Curtis Strange , uBen Crenshaw , uDavid Duval no- Ernie Els .
Isizathu esiyinyaniso iTiger Izinkuni ziGqoka iiSiraphu eziBomvu kwiiRounds zokugqibela
Ngaba iVithamini C iComical Organic?
Iingoma ezigqwesileyo zikaPatty Griffin
Yintoni Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Eyona Yona Eyona Mbi
Igalari Yomfanekiso: U-Queen Hatshepsut, uFaro ongumfazi waseYiputa